အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲ.... ~ ဒီမိုဝေယံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲ....
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲကို ယနေ့ ၂၉.၆.၂၀၁၁ နံနက်၁၀နာရီ တိတိတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဘဘဦးတင်ဦးမှ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ အောက်မြန်မာပြည်ရှိ
၁. ကရင်ပြည်နယ် မှ ၁၀ဦး
၂. မွန်ပြည်နယ်မှ ၈ဦး
၃. ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ၄ဦး
၅. ပဲခူးတိုင်းမှ ၄၈ဦး
၆. ဧရာဝတီတိုင်းမှ ၂၅
၇။ ရန်ကုန်တိုင်းမှ ၂၀၉ တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ၃း၂၀တွင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။